Shiinaha Gabion mesh mesh Soo saar iyo Warshad | Youte Makiinado
gabion mesh mashiinka
Mashiinka mesh Gabion
Mashiinka fuuli jiray Gabion
mashiinka mesh silig laba geesood ah
Mashiinka mesh silig laba geesoodka ah ee CNC
silsiladda isku xidhka mashiinka xayndaabka
Mashiinka siligga leh
Mashiinka siligga ah ee silig ku xiran
Mashiinka siligga ah ee siligga ku xiran
Mashiinka Net Net
Mashiinka sawirka siligga
Mashiinka Gabion Mesh
Mashiinka saafiga ah ee qafiska dhagaxa ayaa sidoo kale loo yaqaan mashiinka netka weyn ee hegagon. Mashiinka mesh gabion-ka wuxuu leeyahay qaab-dhismeed jiif ah waxaana loo isticmaalaa in lagu soo saaro meshes waaweyn oo laba geesleyaal ah oo leh ballacyo kala duwan oo mesh ah iyo cabbirro kala duwan oo mesh ah. Qalabka ceyriinka ah wuxuu noqon karaa silig bir ah ama silig bir ah polyvinyl chloride, siligga birta GALFAN iyo wixii la mid ah. Mashiinka mesh gabion wuxuu bixin karaa alaabooyinka mesh gabion ee mashaariicda dhismaha kala duwan. Wax soo saarka Gabion waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo ilaaliyo loona taageero wadooyinka, jidadka tareenada, garoomada diyaaradaha iyo meelaha la degan yahay inta lagu gudajiro hawsha bulaacada. Darbiyada haynta ah waxaa loo dhisi karaa shabagyada ilaalinta xeebta, ilaalinta bangiga wabiga, weirs, dhul beereedka, daaqa daaqa, baqashada xayawaannada, shabagyada taranka ee badda oo qoto dheer, shabagyada xoojinta derbiyada dhismaha iyo shabagyada kale ee go'doominta ayaa ah waxyaabo aad u rajo badan.
Xuduudaha farsamada aasaasiga ah
Ballaca ugu badan
Dhexroor silig ah
3 ama 5
Tacliiq: soosaara karaa nooca kartoo.
1. Isku darka dalabaadka suuqa, ikhtiraacida wax soo saarka cusub, yaraynta kharashka maalgashiga 50% marka la barbar dhigo mashiinada saafiga ah ee gabion culus, iyo hagaajinta wax soo saarka wax soo saarka;
2. Mashiinka wuxuu qaataa qaab dhismeedka jiifka ah, mashiinku wuxuu u shaqeeyaa si habsami leh;
3. Mugga ayaa la dhimay, aagga la haysto ayaa yaraaday, isticmaalka korontada si aad ah ayaa loo dhimay, qiimaha waxsoosaarkana siyaabo badan ayaa loo dhimay;
4. Hawlgalku waa ka fudud yahay, laba qof ayaa shaqeyn kara, si weyn u yareynaya kharashyada muddada-dheer ee shaqaalaha;
5. Lagu dabaqi karo alaabooyin kala duwan sida silig galvanized kulul-dip, aluminium zinc-aluminium ah, silig bir ah oo kaarboon yar, fiilo elektaroonig ah, silig dahaaran PVC;
6. Ballaaruhu wuxuu gaari karaa 4m, waxaana la soo saari karaa labo shabaq oo 1.5m ah isla waqtigaas si loo wanaajiyo wax soo saarka wax soo saarka. Kala duwanaanta fidsan waa 1.0 ~ 3.0mm. Siligga qaro weyn waa la tolli karaa. Cabbirka mesh ee shabaqa qafis dhagax caadi ah waa: 60x80, 80x100, 100x120, 120x140, 120x150
1. gabion mesh mashiinka
2. Mashiinka fuuli kara
3. Mashiinka yaraanaya
4. Isbedelka xiisadda
5. Haydarooliga baler
Hore: baler Haydarooliga
Xiga: Mashiinka fuuli jiray Gabion
Enviromesh Gabions Mashiinka
Mashiinka Dambiisha Gabion
Mashiinka Gabdhaha Gabon ee Gabion
Mashiinka Bakhaarka Gabion ee Gabion
Mashiinka Sanduuqa Gabion
Gabion Box Mesh Mashiinka
Gabion Xayndaabka Xayndaabka Mashiinka
Mashiinka Xayndaabka Gabion
Mashiinka Sameynta Gabion
Gabion Mesh Mashiinka Mashiinka
Gabion Mashiinka Sameynta gidaarka
Mashiinka Wayo ee Gabion
Gabion Mesh Mesh Mashiinka
Aaga Warshadaha Lixinzhuang, Dingzhou, Hebei, Shiinaha